China Carbopol 940 mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
Igama: ICarbomer Carbopol
ICarbomer 940 Carbopol940 yipolyacrylate Polymer enqamleza umnqamlezo esetyenziswa kwiijel zokukhathalela ubuqu kunye nezithambiso njengesixhobo sokuguqula i-rheology esisebenzayo. Iyakwazi ukubonelela nge-viscosity ephezulu, ukuqina okugqwesileyo kunye nokumisa ukusebenza ngedosi ephantsi. Ukuhamba kwayo okufutshane (ukungasebenzisi-drip) iipropathi kufanelekile kwizicelo ezinje ngeegel ezicacileyo, iigels ezinotywala, iikhrimu. Xa ingathathi hlangothi ngealkali yenza amanzi aqaqambileyo okanye iigels ezinotywala kunye neekhrim.
Imicimbi efuna ukuNikwa ingqalelo
Emva kwe-carbomer neutralization, ukuvuselela ixesha elide okanye ukuvuselela i-shear ephezulu kuya kubangela ukulahleka kwe-viscosity
Ubukho bee-ion - ii-electrolyte zinciphisa ukusebenza ngokuqina
Imitha ye-Ultraviolet kunye nexesha elide le-ultraviolet irradiation iya kwenza i-carbomer gel ingathathi ntweni kwimitha ye-ultraviolet xa i-viscosity yayo incitshisiwe yi-pH> / = 10.
Utshintsho lobushushu kwi-carbomer gel aluchaphazeleki bubushushu.
I-Microbe carbomer ayixhasi ukukhula kwesikhunta sebacteria, kwaye ukukhula komngundo wentsholongwane akuchaphazeli iipropathi zejel. Umthamo oqhelekileyo we-0.2-0.4% unokutshintsha i-3-7% ye-emulsifier yesiqhelo. Ipolymer yeCarbomer iphantse ayinapropathi yomntu osebenza ngokusempilweni. Ke ngoko, ukongeza i-0.1-0.5% ye-surfactant enexabiso eliphantsi le-HLB inokuhlengahlengisa amasuntswana esigaba seoyile ukuze abe mncinci, ukulungiselela iimveliso ezimhlophe nezicocekileyo zekrimu.
Beka ubomi kwishelufa:Iinyanga ezingama-24
Egqithileyo ICarbopol 676
Okulandelayo: IPolyethylene Glyeol 300 I-PEG 300